Fisamborana faobe ireo nandray anjara tamin’ny fifidianana savaranonando pro-demaokraty tao Hong Kong tamin’ny Jolay 2020 · Global Voices teny Malagasy
'... rehefa betsaka noho ny isan'ny tratran'ny aretina ny isan'ny nosamborina.'
Voadika ny 20 Janoary 2021 3:43 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Deutsch, Español, Ελληνικά, English
Tamin'ny 6 janoary, mihoatra ny 50 ny mpikatroka nosamborina tao Hong Kong avy amin'ny lalànan'ny fiarovam-pirenena noho ny fandraisany anjara tamin'ny fifidianana savaranonandon'ny vondrona mpanohana ny demaokrasia hifaninana amin'ny fifidianana Vaomieran'ny Fanaovan-dalàna 2020 (LegCo) izay nahemotra avy eo.
Nosamborina ihany koa ny mpahay lalàna John Clancey, izay nanao fanompoana ho mpitahirivolan'ny Herin'ny Demaokrasia ary notafihan'ny polisy ny orinasa misy azy. Notafihana ihany koa ny tranon'i Joshua Wong, satria nandray anjara tamin'ny fifidianana savaranonando ihany koa ilay mpikatroka–izay any am-ponja amin'izao fotoana izao [mg].
Mangataka amin'ny seha-baovao @StandNewsHK @inmediahk @appledaily_hk ny polisin'i HongKong hanolotra ireo antonta-taratasy “mifandraika amin'ny raharaham-piarovam-pirenena ao anatin'ny fito andro”. Melohin'ny @RSF_inter izao fanohintohinana izao ary ampirisihany ny hamerenana feno ny fahalalahan-gazety ao anatin'ny sisintany.
Taorian'ny fifidianana savaranonando, nametraka ny Lehiben'ny Mpanatanteraka ao Hong Kong, Carrie Lam fa noho ny tanjon'ny fifidianana savaranonando hanao izay hanakanana ny fametrahana ny politikan'ny governemanta, ny fihetsika dia heverina ho “fanozongozonana” araka ny lalànan'ny fiarovam-pirenena vao nampiharina.
Naneho ny heviny tamin'ny fisamborana faobe ny sekreteran'i Hong Kong misahana ny Fiarovana, John Lee, izay mbola namerina ny fanambaràna teo aloha avy amin'i Carrie Lam sy ny any Beijing. Tamin'ny fanononana ny fanehoan-kevitr'i Benny Tai tao amin'ny Apple Daily momba ny fivoarana ara-politika 2020-2022, niteny i Lee :
Nosoritan'ny filohan'ny Antoko Sivika Alan Leong tao amin'ny valan-dresaka ho an'ny gazety fa zo ara-dalàmpanorenana ananan'ny mpanao lalàna ny mifidy manohitra ny tetibola. Nasehon'ny filohan'ny Antoko Demaokratika, Lo Kin-hei, ihany koa ny finoana fa ny fisamborana dia ho famaliana faty ireo politisianina nahazo fanohanana avy amin'ny vahoaka.
Maro, ao anatin'izany ny artista-mpikatroka Baidiucao, nitsikera ny Vondrona Eoropeana tamin'ny fanasoniavana fifampiraharahana ara-pampiasambola nifanaovana tamin'i Shina ka nampisy ny famoretana ara-politika nataon'i Beijing tao Hong Kong: